Messi oo ka codsaday maamulka Barcelona inay sameeyaan saxiixa xiddig ka tirsan kooxda Bayern Munich – Gool FM
Messi oo ka codsaday maamulka Barcelona inay sameeyaan saxiixa xiddig ka tirsan kooxda Bayern Munich
Dajiye September 2, 2019
(Spain) 02 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa isku dayaysa inay kala ogaato mustaqbalka laacibkeeda Nélson Semedo kaasoo aan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican ee dhanka daafaca ah.
Xiddiga reer Portugal Nélson Semedo ayaa suuqan xagaaga si weyn lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxda Paris Saint-Germain.
Haddaba Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa in saraakiisha kooxda Barcelona uu ku war galiyay inuu rajeynayo inuu la ciyaaro daafaca dambeedka bidix naadiga Bayern Munich ee Joshua Kimmich.
Joshua Kimmich ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda Bayern Munich, isagoo tiir u ah qorshaha tababaraha reer Croatia ee Niko Kovač.
Kimmich ayaa wuxuu boos joogto ah kahelay Bayern inkastoo uu kooxda yimid guulystihii koobka adduunka 2018 ee reer France Benjamin Pavard.
Si kastaba ha noqotee, kooxda ree Germany ee Bayern Munich ayaa la filayaa inay weydiisato ugu yaraan 50 milyan illaa iyo 60 milyan oo euro si ay ugu ogolaato Joshua Kimmich u dhaqaaqista garoonka Cam Nou.
Barca ayaa laga yaabaa inay rajeyneyso inay ka faa’iideysato xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada kooxood, kaddib markii ay ogolaadeen inay qaab amaah ah ay ku siiyaan xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho suuqan xagaaga.
Zidane oo ka hadlay barbarihii ay xalay la galeen kooxda Villarreal & kaarkii roosaha uu qaatay Bale
Goolhaaye Keylor Navas oo macsalaameeyay Real Madrid, isagoo ku sii jeeda Paris si loo dhameystiro heshiiskiisa